२.३७ % ले घट्यो नेप्से परिसूचक, ६ अर्बभन्दा बढीको कारोबारमा एशियन लाईफको सर्वाधिक हिस्सा
फागुन १८, काठमाडौं । मंगलवार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ३७ प्रतिशत घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक ५९ दशमलव ७० अंकले घटेर बन्द भएको हो । सोमवार ४० दशमलव ६४ अंक बढेर २ हजार ५१५ दशमलव शून्य ३ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको बजार मंगलवार २ हजार ४५५ दशमलव ३३ विन्दुमा झरेको हो ।
यसदिन २ हजार ५२३ दशमलव ४६ विन्दुदेखि खुलेको बजार २ हजार ५२९ दशमलव ६५ विन्दुसम्म पुगेर तल झरेको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २ दशमलव १६ प्रतिशत घटेर ४४३ दशमलव ९५ विन्दुमा झरेको छ ।
गत बिहीवारदेखि घटेको बजार सोमवार बढेपनि मंगलवार पुनः उच्च अंकले घटेको छ । बजारमा ब्याजदर बढ्ने र तरलता घट्ने हल्ला चलेसँगै शेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै लगानीकर्ता आत्तिएर शेयर विक्री गर्न थालेको देखिन्छ ।
यद्यपी सम्बन्धित निकायबाट यस विषयमा आधिकारिक सूचना सार्वजनिक भएको छैन । बजार सम्बद्ध जानकार लगानीकर्ताहरुले बजारमा चलेको हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तत्काल बजारलाई असर पर्ने गरी ब्याजदर पनि नबढ्ने र तरलता संकट नहुने विश्वास पनि जानकारहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
सोमवारको तुलनामा मंगलवार परिसूचक घटेपनि कारोबार रकम बढेको छ । सोमवार रू. ५ अर्ब ६९ करोड २३ लाख १६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलवार कारोबार रकम रू. ६ अर्ब ११ करोड ९६ लाख ३८ हजार रहेको छ । यो दिन २०८ ओटा कम्पनीको ६४ हजार ७८७ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको १ करोड ३१ लाख ६ हजार ७३८ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
बजारमा कारोबार रकमको उच्चता कायमै रहेकाले लगानीकर्ताहरु सक्रिय भएर लगानी गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । अनावश्यक हल्लाका कारण लगानीकर्ताहरु आत्तिएर शेयर विक्रीमा सक्रिय हुँदा बजारमा नकारात्मक असर परेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
मंगलवार कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सको रहेको छ । कम्पनीको रू. २८ करोड २६ लाख ९४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य भने ४ दशमलव ९३ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार २७४ कायम भएको हो ।
यसदिन कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये व्यापारिक समूहको ९ दशमलव १८ प्रतिशत बढेको छ भने होटल्स तथा पर्यटन समूहको शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ ।
यी समूह अन्तर्गतका साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयरमूल्य यो दिन उच्च दरमा बढेको छ । साल्ट ट्रेडिङ्गको ९ दशमलव ९९ प्रतिशत मूल्य बढेर अन्तिम मूल्य रू. ९ हजार २९३ कायम भएको छ ।
चन्द्रागिरी हिल्को शेयरमूल्य पनि यो दिन ९ दशमलव ८९ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५०० पुगेको छ । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको प्रतिकित्ता रू. ८४४ र चन्द्रागिरी हिल्सको प्रतिकित्ता रू. ४५ ले मूल्य बढेको हो । यी कम्पनीसँगै हिमालयन पावर पार्टनरको शेयरमूल्य पनि यो दिन ८ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३२ ले बढेर रू. ३९२ पुगेको हो ।
उच्च अंकले घटेको बजारमा नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ७ दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको छ । यो कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २२ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २७९ कायम भएको छ ।
सोमवार दुई ओटा समूहको परिसूचक बढ्दा बाँकी ११ समुहको घटेको छ । यो दिन जीवन बीमा समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यस्तै, बैंकिङ्को २ दशमलव ५ प्रतिशत, विकास बैंकको २ दशमलव ३३ प्रतिशत, जलविद्युतको २ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, वित्तको १ दशमलव ९८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको २ दशमलव ६५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको २ दशमलव ७६ प्रतिशत, अन्यको २ दशमलव १२ प्रतिशत, लघुवित्तको २ दशमलव ६१ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको १ दशमलव ५७ प्रतिशत र लगानी समूहको १ दशमलव ९६ प्रतिशतले परिसूचक घटेको छ ।